Maalinta: Febraayo 15, 2020
Maanta, suuqa lacagta loo yaqaan 'crypto money Market', oo loo arko cinwaanka sicirrada sare iyo dakhliyada aaminka ah, waa in si dhakhso leh loogu raacaa maalgashiga ugu saxsan oo la isku halleyn karo. Suuqa crypto waa mid aan wanaagsanayn adduunka [More ...]
Wasaaradda Warshadaha iyo Technology Industrial Ammaanka iyo Manager Inspection General Mehmet Bozdemir, Bursa Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha (BCCI) ayaa markii ugu horeysay by wiishka fuliyey sida ammaanka ugu kalsoonaan karo qoreysa in Turkey [More ...]
Ankara Metropolitan Duqa Mansoor gaabis ah, codsiga ugu horeysay mobile Turkey ee Smart City "Capital Mobile" codsiga lala wadaago dadweynaha. Ku imaatinka kulanka dadweynaha ee lagu qabto Hoolka Shirka Dawlada Hoose. sharci-dejiyeyaasha, badhasaabyada degmooyinka, bulshada rayidka ah [More ...]
Go'aanka TCDD Personnel Knal Karadağ in laga qaado booskiisa Izmir oo loo masaafuriyo Malatya ayaa laga noqday iyada oo ay ugu wacan tahay halganka maamulayaasha iyo xubnaha Ururka Shaqaalaha Gaadiidka ee United. TCDD wuxuu dhammeystiray shaqadiisii ​​Izmir waxaana loo masaafuriyey Malatya [More ...]
Safarka ayaa lagu kordhin doonaa Marmaray baahida weyn darteed. Kororka koowaad wuxuu u dhexeeya Maltepe iyo Zeytinburnu. Rakaab badan oo rakaabka ah awgood, ayaa la qorsheynayaa in la kordhiyo safarka Marmaray. Maltepe-Zeytinburnu waa bartilmaameedka koowaad ee Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha iyo TCDD Tasimacilik. [More ...]
Duqa Magaalada Samsun Metropolitan Mustafa Demir ayaa yidhi, "Nidaamka ugu haboon ee Samsun waa nidaamka taayirrada taayirrada taayirrada leh oo aan ka wadno shaqada aan ilaa imika qabanay." Maayarka Magaalada metelan Mustafa Demir, tram [More ...]
Uraw Cosmetics, oo ka shaqeysa maaddooyinka alaabada la isku qurxiyo ee dumarka iyo raggu si joogto ah ugu adeegsadaan nolol maalmeedkooda isla markaana meel muhiim ah ka ah waaxda ay ku guuleystaan ​​waqti aad u yar, ayaa waxay soosaaraa alaabooyinkeeda oo ay ku soo saareen qaabab dabiici ah macaamiisheeda. [More ...]
Maareynta Gaadiidka Dadweynaha ee Bursa (BURULAŞ) waa howlaha gaadiidka ee Dowlada Hoose ee Magaalada Bursa. BursaRay waxay siisaa gaadiid Bursa magaalo BurTram iyo maamulka baska. Gaadiidka dadweynaha ee Bursa oo ansax noqon doona 2020 [More ...]
Diyarbakır Dawlada Hoose ee Magaalada waxay abaabushay hawl ka socota Xarunta Suuqa Karacadağ Ski oo ay weheliso ardayda iyo macallimiin lagu tababbaray Guriga Bilgi. Diyarbakır Waaxda Magaalada Dhakhaatiirta ee Adeegyada Dhallinyarada iyo Cayaaraha, oo wax ku baranaysa Aqalka Macluumaadka [More ...]
Wasiirka Shaqada iyo Amniga Bulshada ee TRNC Faiz Sucuoğlu wuxuu booqday warshadda halkaas oo Günsel, oo ah baabuurkii ugu horreeyay ee dalka laga dhaliyo koronto laga dhaliyo. Dr. Wuxuu kahelay İrfan Günsel macluumaad kusaabsan shaqooyinka. ka Wasaaradda [More ...]
AnkaraKart waa kaarka magaalada ee gaadiidka lagu qaado oo markasta aad sidato. Kaararka smartka ah ee aan lala xiriirin ee loo isticmaali karo adoo u soo dhaweynaya aaladaha aqrinta kaararka dhammaan gawaarida gaadiidka dadweynaha ee ku xiran EGO iyo kaarka akhrinta ugu sareysa aaladahaan. [More ...]
Dadka degan xaafadaha Derbent waxay ka mudaaharaadeen in Saldhigga Tareenka taariikhi ah uusan noqon doonin mid shaqeynaya. Xarunta tareenka taarikhiga ee taarikhiga ah ee Kartepe, ayaa waxaa si rasmi ah u saxeexeysa Köseköy iyo Pamukova oo ah Agaasimaha Guud ee Maamulka Tareenka Waddooyinka. [More ...]
Xal fudud, waxaan ku kicin karnaa kooxaha hurdada waxoogaa yar oo maalgashi yar ah isla markaana aan abaabulno maalgashi la'aan. Maalgashi yaryar, waxaan ku kordhin karnaa heerarka horumarka goboladayaga dhaqaala ahaan gadaalkeennu yahay. Fursad noocan oo kale ah ayaa magaaladeena ka jirta .70-80 diyaarado ayaa soo dagi kara [More ...]
Taariikhda Maanta 15 Febraayo 1893 Shirkadda Diyaaradda Anatolian Railway waxay saxiixday heshiis dhimis ah Ankara-Kayseri iyo Eskişehir-Konya. Heshiiskan ka hor, mucaaradka Jarmalka iyo xafiiska arrimaha dibedda ee Ingiriiska waxay yeesheen shirar kala duwan oo u dhexeeya mucaaradka Ingiriiska [More ...]